Ogaden News Agency (ONA) – Radio Xoriyo: Faah faahin Dheeraad ah Dabkii ka kacay Xerada Qaxootiga Dhagaxlay ee Kenya
Radio Xoriyo: Faah faahin Dheeraad ah Dabkii ka kacay Xerada Qaxootiga Dhagaxlay ee Kenya
Warbixin dheeraad ah: Khasaaraha soo gaadhay ganacsatadii Suuqa gubtay
Faah faahin dheeraad ah oo ku saabsan dabkii baabi’iyay suuqa dhagaxlay ayaa sheegaya inuu dabkan ka bilowday hotel ku yaala badhtamaha magaalada oo lagu magacaabo Somali hotel. Ka dibna dabka ayaa si dhakhsa ah ugu faafay guud ahaan suuqii dhagaxlay wuxuuna dabku qabsaday suuqa bacadlaha oo ku dhawaa goobta uu ka bilowday dabku wuxuuna durbaba ku fiday suuqa dukaamada iyo bakhaaradaha raashinka lagu gado wuxuuna isla markiiba lawareegay dhamaan qaybaha suuqa oo uu baabi’iyay.
Suuqan waxaa ku gubatay hanti aad ubadan oo aan laqiyaasi karin. Waxaa suuqan ku ganacsan jiray dad milyaar deera ah iyo dad danlay ah waxaana taalay hanti malayiin doller ah oo gubatay inta badan. Hadaba dadka ay hantidu ka gubatay waxaa kamid ah dad u dhashay wadanka Ogadenya oo hanti badani kaga gubatay waxayna isugu jireen dad hantiilayaal ah iyo dad danyar ah. Waxaana laga xusi karaa dadka reer Ogadenia ay hantidu kaluntay carwadii waynayd ee CARWO QORAXAY iyo hotelka wayn ee HOTEL MADIINA iyo shirkado farabadan oo dad reer Ogadenya ah oo 40 qof ka badan oo isku dardarsaday lacago islamarkaana sameeyay ganacsi balaadhan oo uusan waxba u bixin. Dadka kale ee ree Ogadenia ah ee ay hantidu ka gubatay ma aha wax 1, 2, 100, iyo 200 lagu soo kobi karo ha ahaadan kuwo dukaano lahaa, kuwo bacadle lahaa, kuwo bakharo raashin lahaa iyo qaar ganacsi yar yar ku dhax haystay suuqa.
Waxaa sidoo kale hanti badani ka gubatay dad u dhashay gobolada Jubooyinka oo ah dadka deegaan ahaan ugu badan xerada dhagaxlay oo runtii ay kaluntay hanti aan la qiyaasi karin. Waxaad arkaysaa dad kudhahaya shalay waxaan ahaa taajir maantana waxaan ahay faqiir.
Sikastaba ha ahaatee suuqii camiraa ee Dhagaxlay ayaad arkaysaa un qiiq olol iyo madow dadkuna waxay dadka isku sabirsiinayaan; Allah ayaa keenay masiibadan wuxuuna nasiin doonaa badal khayr qaba.
abdullahi guure says:
waxan u tacsiyaynayaa dhammaan dadkii soomaaliyeed ee hantidu kaga gubatay suuqa xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaan illahay ka baryayaa inuu badal kheyr leh siiyo iyagana samir iyo iimmaan ka siiyo ammiin